मलेसिया हुनेले हेरौ: मलेसियाको घरफिर्ती योजना अब कति दिन बाकी ? - jagritikhabar.com
मलेसिया हुनेले हेरौ: मलेसियाको घरफिर्ती योजना अब कति दिन बाकी ?
मलेसियामा अवैधानिक तवरले बसिरहेका बिदेशी कामदारहरू फेरि स्वदेश फर्कन पाउने भएका छन्। सुरुमा जुन देखिसुरु गरेको घर फिर्ती योजना रहेको मलेसिया सरकारले कोरोनाको कारण देखाउदै फेरि इलिगलहरुलाई घर फिर्ताको मौका दिने भएको छ ।
सुरुमा ६ जुनदेखि ईन्डोनेसियाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सरु गरेको मलेसियाले फेरि स्वदेश फर्किन मौका दिने भएको छ । अन्य देशका नागरिकलाई पनि फेरि स्वदेश फर्किनको लागी सुरु गरिने तयारी भएको मलेसियाका रक्षा मन्त्री ईस्माईली साव्री याकोवलाई उधृत गर्दै स्थानीय पत्रिका ‘द स्टार’ले जनाएको छ ।
फर्कने कामदारको सुरुमा कोरोना परीक्षण गरिनेछ । परीक्षणमा काेरोनाको संक्रमण नदेखिएकाहरुलाई स्वदेश फर्काउन सुरु गरिनेछ । हाल मलेसियाको घरफिर्ती केन्द्रमा सबैभन्दा धेरै इन्डोनेसियाली र नेपाली नागरिकहरू रहेका छन ।
मलेसिया सरकारले मलेसियाको विभिन्न जेलमा रहेका अवैधानिक हैसियतका आफ्ना नागरिक घर फिर्ता लैजान विभिन्न देशका सरकारलाई अनुराेध गरेको छ ।
जसअनुसार नेपाल , इन्डोनेसिया, बंगलादेशले सहमती दिएको मलेसिया सरकारले जनाएको छ । समाचार स्रोत अनुसार यहि डिसेम्बर सम्म्ममा मलेसिया सरकारले इलिगलहरुलाई घर फिर्ता गर्न दिने जनाएको छ ।